Araka ny antontan'isa, isan-taona dia misy marary marary 1,1-1,8 tapitrisa, 400000-800000 maty isan-taona ary 86,5% ny tsy fahampiana. Araka ny antontan'isa nataon'ny manam-pahaizana sasany, ao anatin'ireo marary marobe sisa velona, ​​ny 10% no niverina mba hiasa nefa tsy misy kilema mazava, 40% no namela kilema kely, 40% no mila fanampiana manokana, ary 10% no mila fikarakarana manokana. Ny karazana hemiplegia rehetra vokatry ny fivontosana no sequelae mahazatra. Raha tsy tsaboina ara-potoana izy ireo, ny maivana dia hamela kilema, izay hisy akony lehibe amin'ny fiainany sy ny asany. Ny mavesatra dia tsy ho afaka hikarakara ny fiainany manokana, tsy ny tenany ihany no hijaly, fa koa mitondra enta-mavesatra lehibe ho an'ny fianakaviany. Aorian'ny fanarenana dia ny 90% amin'ireo marary hemiplegic dia afaka mandeha indray ary mikarakara ny tenany, ny 30% amin'izy ireo dia afaka mamita asa ihany. Ilaina ny hanatanteraka ny fiofanana mandeha amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Noho ny fahatsoran'ny rafi-rafi-po eo afovoany, na dia tsy mahazaka ny hozatra aza, ny taolam-pandevony dia afaka mipoitra amin'ny sampana manaraka ny axon, izay afaka mahatonga ny taolam-bolo taorinan'ny fitrandrahana indray, mahazo vahana indray, manetsika ny hery anaty anaty vatana, ary hampiroborobo ny fisehoan'ny fiasan'ny nerveo. Ankoatr'izay, ny fampiofanana fanarenana mandeha dia mety hanaitra ny hafanam-pon'ny marary sy hanatsara ny fatokisan'izy ireo ny fahasitranana. Ireo mpandeha amin'ny hemiplegic izay azontsika omena,